Surrey Place - Ku Noolaanshahaaga Noloshaada Inta Aad Nooshahay
Wadashaqeynta Nala Wadaag
Cilmi baarista hada socota
Jawaab celintaadu Waa Muhiim
Hadafka, Himilada, Qiimayaasha
Hoggaan iyo Maamulka
Warbixinno & Qorshooyin Ganacsiyeed Sannadle ah
Daabacadaha iyo Tirakoobka
Siyaasadaha & Shaacinta
Barnaamijyada & Adeegyada
Cudurka Autism Spectrum
Barnaamijka Taageerada Dugsiga
Adeegyada la Siiyey Guddiyada Dugsiyada
Adeegyada La Siiyey Wakaaladaha Bulshada
Adeegyada la Bixiyay
Qorshaynta Adeegga Isuduwidda (CSP)
Dhalmada iyo Carruurnimada Hore (Da'da 0 - 6)
Barnaamijyo Gaar ah iyo Adeegyo
Kooxo iyo Aqoon isweydaarsiyo
Adeegyada Ciladda Khamriga ee Uurjiifka
Barnaamijka Faragelinta Hore ee Indhoole-Hooseeya (Da'da 0 - 6)
Carruurta & Dhallinyarada (Da'da 6 - 18)
Wadatashi iyo Tababar
Dadka waaweyn (Da'da 18 +)
Kheyraadka & Taageerada
Sheekooyin, Warar & Dhacdooyin
AMMAANKAAGA WAA MUHIIMADAYN Waxaan u furan nahay
Adeegyada Telehealth oo keliya
Ballamada shaqsi ahaaneed waa la joojiyay sababo la xiriira COVID-19
TAAGEERADA INTARNETKA AH Wellness
Gaadhsiiyey meelkasta oo aad joogtid
La Soco Dhacdooyinka
TAAGEERADA INTARNETKA AH Qoyska Aasaasiga ah
Caawinta daryeelayaasha ku barbaarinaya cunug qaba cudurka autism
Balanqaadka Qofka-Shaqada ah Waa La Joojiyay COVID-19 awgeed
Macaamiisha qaaliga ah, daryeel bixiyeyaasha, iyo xubnaha bulshada, Ontaariyo waxay sii wadaa inay la kulanto kororka kiisaska wanaagsan ee COVID-19. Ka dib feker badan iyo tixgelin taxaddar leh, waxaan go'aansanay inaan xirno xafiisyadeenna si aan u ilaalino macaamiisheenna, qoysaskeenna, booqdayaasheena iyo shaqaalaheenna, isla markaana aan gacan uga geysano yareynta faafitaanka COVID-19. Inta lagu guda jiro […]
Xiritaanka Fasaxa ee Ballamada Qofka Qofka ah oo la Kordhiyay
Diidmo: Fadlan ogow inaan go'aansanay inaan baabi'inno dhammaan ballamaha shaqsiyeed. Faahfaahin dheeri ah kala soco cusbooneysiinteenna ugu dambeeyay. Macaamiisha qaaliga ah, daryeelayaasha, iyo xubnaha bulshada, Surrey Place waxay xirmi doontaa ciidaha Khamiista, Diseembar 24 duhurkii waxayna dib u furi doontaa Isniinta, Janaayo 4, adeegyada Telehealth. Wax badan oo ka mid ah […]
Wasaaradda Caafimaadka waxay siisaa Mid-West Toronto kooxdeeda Caafimaadka Ontario ee shaambadda oggolaanshaha
Goobta Surrey ee Bixinta Taageerada Bulshada Bishii Noofambar 18, ururada bahwadaagta la ah gobolka Mid-West Toronto waxaa loo oggolaaday inay noqdaan Kooxda Caafimaadka ee Ontario, taasoo calaamad u ah guul muhiim u ah bukaanada, macaamiisha, qoysaska iyo daryeel-bixiyeyaasha magaalada bartamaha galbeed ee Toronto. Surrey Place waxay ku faantaa inay ka mid tahay in ka badan […]
© Copyright 2021 Xarunta Meelaha Surrey Dhammaan xuquuq dhowran
Maanta isdiiwaangeli oo si joogto ah ula soco wararkii ugu dambeeyay ee hareeraha ururka.
Weligaa ha arag fariintan mar labaad.